काठमाडौंमा भएको यो भयानक दु-र्घटना ! – List Khabar
Home / समाचार / काठमाडौंमा भएको यो भयानक दु-र्घटना !
काठमाडौंमा भएको यो भयानक दु-र्घटना !
admin July 4, 2021 समाचार Leaveacomment 75 Views
काठमाडौंमा भएको यो भयानक दु-र्घटना ! काठमाडौैँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–५ मुलपानीमा हिजाे भएको सवारी दु-र्घटनामा दुई जनाको मृ-त्यु भएको छ ।
यहाँस्थित सडकबाट बा ५ ख २५११ नम्बरको टिपर अनियन्त्रित भई प-ल्टिएर अन्दाजी ५० मिटर तलको टहरोमाथि ख-स्दा उक्त दु-र्घटना भएको हो । उक्त घ-टना हुँदा टिपरले च्या-पिएर टहरामा बसेका दुई जनाको मृ-त्यु भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
मृ-त्यु हुनेमा नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिका–३ घर भएका ५३ वर्षीय साईँला तामाङ र श्रीमती ५५ वर्षीया जयन्ती तामाङ रहेका छन् । टिपर चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।
याे पनि, भारतमा उत्पादित काे-राेना विरुद्धको खाेप `कोभिसिल्ड´ लगाएका व्यक्तिहरुलाई युरोप यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने ! को-रोना खोप लगाएकालाई यात्रा अनुमति दिने तयारी गरेको युरोपेली संघले भा-रतमा उत्पादित कोभिसिल्ड लगाएकालाई भने प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ ।
युरोपेली संघको चिकित्सासम्बन्धी कार्यालयले भा-रतमा उत्पादित कोभिसिल्ड लगायतका केही खोप लगाएकालाई विश्वास गर्न नसकिने जनाएको हो । युरोपेली चिकित्सा कार्यालयले युरोपेली आयोगलाई समेत भा-रतमा बनेको खोप लगाएकाहरूलाई युरोप प्रवेशमा अनुमति नदिन सिफारिस गरेको छ ।
अमेरिका, बेलायत र युरोपेली मुलुकहरूमा बनाइएको खोप लगाएकालाई मात्रै युरोप प्रवेशका लागि अनुमति दिइने र यसो भएमा मात्रै युरोपमा को-रोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलन कम हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
युरोपेली आयोगको निर्णयसँगै भा-रतको कोभिसिल्ड खोप प्रतिको विश्वसनीयता र उपयोगीतामा फेरि आशङ्का उत्पन्न भएको छ । नेपालमा पनि भा-रतमा उत्पादित कोभिसिल्ड खोप लगाइएको छ ।
Previous एकाबिहानै नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डबाट आएको यो खबर, यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने अवस्य पढ्नुहोला
Next माइतीघर छाेड्ने बेला रुँदा-रुँदै मण्डप मै बेहुलीकाे मृ’त्यु